आज सबैभन्दा लामो चन्द्र ग्रहण ,के गर्दा शुभ, के गर्दा अशुभ ?
शुक्रवार, मंसिर ३, २०७८ खुला बहस संवाददाता
काठमाडौं । शुक्रबार(आज) चन्द्र ग्रहण लाग्दै छ । यो सन् २०२१ को अन्तिम चन्द्र ग्रहण हो । पछिल्लो ५ सय ८० वर्षमा पहिलो पटक सबैभन्दा लामो अवधिसम्म शुक्रबार चन्द्र ग्रहण लाग्नेछ । यो चन्द्र ग्रहण ३ घण्टा २८ मिनेट २४ सेकेन्ड लामो हुनेछ ।
के गर्दा शुभ, के गर्दा अशुभ ?
चन्द्र ग्रहणका बेला सुतेमा रोग लाग्ने, दिसापिसाव गरेमा दरिद्र हुने, त्यसपछि दिसापिसावको किरोको योनीमा जन्म हुने धार्मिक विश्वास छ । यस्तै यो बेलामा मैथुन गरेमा गाउँको सुँगुर भएर जन्मने, शृङ्गार वा गाजल लगाए कुष्ट रोगी हुने, भोजन गरेमा अधोगति पतन हुने, बन्धनमा बसे सर्पको योनि हुने र कसैलाई मारेमा वा आफू मरेमा नरकमा जाने धार्मिक विश्वास छ । तर यसमा वैज्ञानिक सत्यता भने पाइएको छैन ।
ग्रहणको समयपछि घर मन्दिर वा पूजा कोठा सफाइ गर्नुपर्ने र मूर्तिहरूमा जल फेर्नु पर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । ग्रहण समयमा पूजा गर्नु हुँदैन। मन्दिरमा पनि ग्रहणको समयमा पूजा पाठ बन्द
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, मंसिर ३, २०७८, ०७:३९:४०